Ithegi: ifowuni yocingo | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 25, 2020 NgoLwesine, uJuni 25, 2020 URyan Crozier
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, amashishini amaninzi atshintshele kwintengiso ye-Intanethi ngenxa ye-COVID-19. Oku kushiye imibutho emininzi kunye namashishini amancinci ebaleka ukuza nezicwangciso ezisebenzayo zokuthengisa ngokwedijithali, ngakumbi ezo nkampani zixhomekeke ikakhulu kwintengiso ngeevenkile zazo zezitena nodaka. Ngelixa iivenkile zokutya, iivenkile zentengiso, kunye nabanye abaninzi baqala ukuvula kwakhona, isifundo esifundwe kwezi nyanga zidlulileyo sicacile- ukuthengisa kwi-Intanethi kufuneka kube yinxalenye yakho
Andiqinisekanga ukuba ndikhe ndavavanya i-prototyping elula kune-Fluid. Ngokukrakra, kuya kufuneka unike umhleli wabo uvavanyo lokuqhuba, ilula ngendlela emangalisayo, inomdla kwaye inepallet eyomeleleyo yokutsala kunye nokulahla izinto zomsebenzisi ezifikelela kwigridi kunye nobukhulu ngengqondo. Ulwelo lunesoftware yomdlali osetyenziselwa i-Android, i-iPhone kunye ne-iPad. Bayakuvumela ukuba wakhe iiprototypes ezinemifanekiso emininzi, ukhuphele ngaphandle ukuphuma kwescreen, ukongeza izijekulo kunye notshintsho ngokuswayipha, cofa,
Sikhona sonke… indawo yakho ifuna ukuvuselelwa. Nokuba ishishini lakho libuye labuya kwakhona, isiza siye saguga kwaye sabudala, okanye ayizukuguqula iindwendwe ngendlela oyifunayo nayo. Abathengi bethu beza kuthi ukuze bandise uguquko kwaye kuhlala kufuneka sithathe inyathelo ukubuyela umva kwaye sibaqalele kwakhona bonke ubume bewebhu ukusuka ekutshiseni uphawu ukuya kumxholo. Sikwenza njani oku? Indawo yewebhu yahlulwe yangamacandelo amathandathu
Isixhobo: Ukwandiswa kwefowuni yokuFowunela i-Illustrator CC / CS5 +
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 26, 2014 NgoLwesibini, Februwari 25, 2014 Douglas Karr
Uninzi lwabahlobo bam abakwishishini sele benamagama wocingo besebenzisa i-Illustrator kodwa iArmature ifikile- ulwandiso lwama- $ 24 lweAdobe Illustrator. Isixhobo somkhosi sinengqokelela yezinto zokuqonda ukusebenza kwewebhu, iiapps zeselfowuni, kunye neewebhusayithi zokutsala kunye nokulahla ucingo. Yintoni i-wireframe? NgokweWikipedia: IWireframe yewebhusayithi, ekwabizwa ngokuba yiphepha lesikimu okanye uyilo lwesikrini, sisikhokelo esibonakalayo esimele isakhelo samathambo